Kaarka Aqoonsiga: Faa’idooyinka Amni ee u Leeyahay Dalka | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Jama Hursow — December 8, 2018
Siddii ay doowladii dhexe u burburtay 1991, waxa meesha ka baxay dhammaaan adeegyadii bulshada iyo inta badan arimaha aas-aasiga u ah bulshada Soomaaliyeed. Maqaalkaan waxaan rabaa inan inyar kataabto muhiimada ay u leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay helaan Kaarka Aqoonsiga iyo Baasaboorka.
Waxa siddoo kale wax kataabanayaa dhibaatooyinka uu leeyahay lahaansha la’aanta Kaarka Aqoonsiga (National ID Card).
Wadan marka la dhaho waxa jira arimo aas-aas u ah in wadankaas laga helo. Waxa kamid ah, calan ugaar ah, dhul joqraafiyada ugaar ah, ciidan ugaar ah, luuqad, xuduudo, maamul, lacag, madaxbanaani iyo waliba Kaararka Aqoonsiga iyo inkale oo badan. Markaas ayaa lagu macneeya inuuyahay Wadan. Arintaan waxazn usoo qaatay ayaa waxay tahay wadanka Sooomaaliya dhammaan bulshada ma haystaan sharciga aqoonsiga dalka. Arintaas ayada ahna dhibaato weyn ayeey ku tahay jiritaanka qaran ee wadankeena. Taas oo ay kamidtahay amnidarata kajirta wadanka, sawabtoo ah waxaad tahay laguma yaqoon, isla xisaabtanka sida marka cashuuraha, caafimaadka, waxbarashada iyo dhammaan lasocodka dhaq-dhaqaaqa muwaadinka. Dhamaan intuba dhibaato ayey kutahay wadankeena Soomaaliya.
Faa-idooyinka uu leeyahay Kaarka Aqoonsiga:
Amniga: Dhinaca amniga kaarka aqoonsiga door muhiim ah ayuu kuyeelan karaa, maxaa yeelay ruux aan haysanin sharciga wadanka ma garan kartid in uu horay dambi u galay ama laga shikisnaay iyo in uu yahay ruux waxba galabsan.
Ruuxa marka uu sharci wato ciidamada waxa u fududaani inay gartaan ruuxaan, iyagoo eegay tusaale ruuxaan meesha uu deganyahay, waxa uu qabto iyo dib u eegista taariiqdiisa, sida in dhibaato burcadnimo ah inuu geeystay iyo in tuhun dhinaca amniga qaranka ah horay loogu tuhmayey. Halkaas isla xisaabtan iyo inay yaraato qatarta dhinaca amniga iyo debbiyada ayaa laga faa-idaa ruuxa marka uu wato National ID Card.
Shaqada: Soomaaliya waxa ka jirta marka ruuxa shaqo helo in laweeydiiyo dammiin, Halka la rabay in ruuxa laweeydiiyo kaarka aqoonsiga (sharciga). Looshaqeeyaha waxa uu fursad u heli karaa marka inu baaro ruuxaan isagoo la kaashanaya ciidamada, in ruuxaan xaq uleeyahay inuu shaqeeyo, cashuurta laga qaadayo (ama in horay dowlada cashuur ugu laheyd), iyo in dhibaato uu horay usoo geeystay, ama meel kale ee uu kasoo shaqeeyay.
Waxwalbana adeegsigeeda waxaa wanaagsan in laga dhigo kombuuterka
Degenaanshaha, waxbarashada iyo dhammaan addeegyada caafimaadka: Dabcan, ruuxa marka u haysto Kaarka Aqoonsiga waxa hay-adaha doowladu heli karaan warbixinta ruuxa oo dhameeystiran, hadeey tahay caafimaadka ruuxa: sida ruuxaan ma daawooyin aya usocda, imisa daawa ayuu qaataa, xiliyada uu booqday meelaha caafimaadka lagu dabiibo iyo waxa lamidka ah. Marka la eego dhinaca waxbarashada Kaarka Aqoonsiga waxa u macalimiinta ka caawiyanayaa inay helaan warbixin buuxda ee markaas ka turjumeeysa waxbarashada, meelaha kusoo waxbaratay, inu horay usoo waxbartay iyo inusan usoo waxbaran. Imtixaanada, ruuxaan isaga mayahay imtixaanka gelaya, ka eegista marka uu codsanaayo waxbarashada iyo is alahaanshaha magaca ku qoran shahaadada iyo Kaarka Aqoonsiga.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado ruuxa meesha uu deganyahay si loola xiriiro marka loo baahdo iyo marka loo dirayo waraaqaha iyo waxa lamidka ah.
Tirakoobka deegaanka, gobolada iyo dhammaan wadanka: Kaarka Aqoonsiga waxa u ka caawinayaa maamulka inay hayaan tirakoobka saxda ah ee bulshada markaas kunool hadaay tahay tuulo, degmo, gobol iyo dhamaaan wadanka. Waxa kale ee ka caawineeysaa maamulka inay hayaan dhamaan xogta bulshada: sida kuwa waxbartay, kuwa shaqeeya, kuwa xanuusan ee markaas u baahan taakuleyn iyo doorashooyinka.
Safarada: Bulshada Soomaaliyeed marka ay u baahanyihiin ayeey qaataan sharciga Soomaaliga, qaasatan marka ay safrayaan eyeey raadsadaan baasaboorka Soomaaliga, hadii ay midkale ee shisheeye haystaana maba kusii jirto oo ma raadsadaan. Maxaa yeelay ka shisheeye ayeey ku safrayaan. Kuwa waxa jira u baahan lakin aan haysan dhaqaale ay markaas ku helaan sharciga Soomaaliga ama adeegyadii eheeday bixinta sharciga ayaa kajirin deegaanka ay markaas ku noolyihiin.
Laakiin sharciga Soomaaliga waxa uu kaa caawinaa waxyaabo badan sida marka doorasho ka dhaceeyso wadanka iyo in lagugu aqoonsado Soomaalinimadaada hadii aytahay wadamada shisheeye iyo doowlada dhexe ee Soomaaliya.
Sharciga Soomaaliga inad haysato aad ayeey muhiim utahay hadii aad joogto wadanka hooyo iyo hadii aad joogto qurbaha. Maxaa yeelay waxa uu cadeeynayaa Soomaalinimadaada. Kuwa qurbaha waxan kula talinayaa markaas intaysan qaadan sharciga Soomaaliga inay eegaan wadanka ay ka haystaan sharciga. In labo sharci lahaysan karo iyo in markaas dastuurka wadankaasi dhigayo haysashada hal sharci. Maxaa yeelay wadamada qaar ayaa ongol in ruuxa haysto kaliya hal sharci, halka wadamada qaar ongolyihiin inad haysatid labo dhalasho (two citizenship)
Tags: Kaarka Aqoonsiga: Faa’idooyinka Amni ee u Leeyahay Dalka
Next post Waa Kumaa Donald Trump?
Previous post Maxaa Iska Bedelay Habdhaqanka Askarta Soomaaliyeed?